Sei Uchishandisa MaSpredishiti eGoogle SeSeti Yepasi Yemafaira? - Semalt Mhinduro
Google Docs kana Google Sheets. Izvozvi mapurogiramu zvinowirirana nevakawanda veMicrosoft Office mazano uye kubatsira kubvisa peji yewebhu yakasiyana nyore. Iwe unogona kushandisa Google MaSpredishiti kuti ugadzire uye ugadzire mafaira mumambure uye uwane data munguva chaiyo-nguva. Google Sheets neGoogle Docs dzakagamuchira rukudzo rwakapararira nokuda kwezvinyorwa zvavo zvisinganzwisisiki, zvinowanzogadziriswa zvemiti nemigumisiro yakavimbika - cheap unmetered vps 1gbps. Kana uri kutarisira kuvaka web scraper muGoogle Sheets, unoda kutevera mashomanana mashoma.
Danho rokutanga ndokukopa URL muchiparidzi.
Muchitsauko chechipiri, iwe uchaenda kunzvimbo, svetera pamusoro pekunyorera kwemunyori uye kurudyi kuti uuye nemenyu.
Chechitatu, iwe uchasarudza pane Chengetedza Element sarudzo. Icharatidza firiji yekuongorora pakarepo apo iwe unogona kuongorora HTML zvinhu.
Nhanho inotevera ndeyokuisa imwe code mune festi yekuvandudza developer. Iwe unogonawo kushandisa basa-import XML yeGoogle Sheetsiti kuitira kuti basa rako riite.
Zvikomborero Zvikuru zveGoogle Sheetsiti:
Kune mitsara yakasiyana-siyana yemakiniti ekugadzirisa basa rako. NeGoogle Sheets, unogona nyore kubata nomusoro mashomanana uye kuita mabasa akasiyana-siyana pakarepo. Somuenzaniso, Ctrl + C inoshandiswa kunyora mavara kubva pamapeji akasiyana ewebhu, uye Ctrl + V inoshandiswa kuisa rugwaro urwu mubhuku rakajeka.
2. Mafomu neongororo
Unogona nyore nyore kuumba mafomu eIndaneti uye kuongorora neGoogle Sheets. Inobatsira kune webmaster uye vatengi vanofarira kugamuchira mhinduro kubva kuvatengi vavo.
3. Nyora uye uchengetedze web content
Chimwe chezvinyorwa zvinokosha zveGoogle Sheetsiti ndeyekuti unogona kupora webhusi nyore nyore. Inokodzera kumabhizimisi uye mapurogiramu uye inovabatsira kuchengetedza mavhidhiyo ewebhu mumutauro unooneka uye unooneka. Unogona kukanda mafaira zvakananga kuDisk disk yako kushandiswa kwepaIndaneti.
Google Mapepa anowirirana nehurongwa hwose hwekushandisa uye makombiyuta uye mafoni. Unogona kuatanidza ne Gmail yako uye download uye kuchengetedza mafaira akawanda sezvaunoda. Ma Sheetere eGoogle akakwana kune vatengesi vedikiki uye vanovabatsira kuita mabasa akawanda.
5. Kukurukurirana panguva yekugadzirisa
Kukwanisa kushamwaridzana neshamwari inobatsira zvikuru yeGoogle Sheets. Iwe unogona kutaura neshamwari paunotarisa mabhii ewebhu yako kana kuisa zvinyorwa mumambure. Iwe unogonawo kupinda mukati mavatengi vako uye kuratidza. Nokuda kweizvi, iwe unofanidza pave museve muChikamu chikamu uye unakidzwa nekukurukurirana kwemazuva.
Kune nhamba huru yemagadhi muGoogle Visualization API Gadhiji Gadhiji. Iwe unogona kutora semagetsi akawanda sezvaunokwanisa uye kuita mabasa ako. Iwe uri mubhadhadzi wekutsvaga kana mutengesi? Google Finance inobatsira kuita mabasa akasiyana mumatare. Iwe unogona nyore nyore kutarisa zviripo zvemazuva ano uye kubvunzurudza dhoroondo yekare. NeGoogle Spreadsheets, unogona kuona nekuzarura chero faira iri kusanganisira. xls, doc,. odt,. xlsx, ppt, nevamwe.